Google na nkwanye ùgwù ya maka ndị ọrụ | Site na Linux
Crazy, Ana m ara ara na-anwa ime ka ihe gbasara Gmail na YouTube ghara ichota m.
Ma ọ bụ na Google anaghị asọpụrụ ndị ọrụ ya ma ọlị, ọ bụrụ na ịchọghị YouTube ị ga-anagide ya ma nwee akaụntụ Gmail gị jikọtara na YouTube n'ihi na ọ na-apụta n'imi ha.
Fọdụ n'ihi nsogbu agwa ekwesịghị inwe YouTube ma ọ nweghị ihe ọ bụla, ebe a ọ baghị uru ma belata ihe ndị mmadụ chọrọ.
Ọ bụghị na ọ na-ewe iwe mana ọ na-ewe m iwe na m na-atụ aro egwu na anaghị m achọ ka otu igwe Nu ma ọ bụ bullshit maka ịhụ vidiyo nke X ihe Vs Y ihe. Ihe bụ na ọbụnadị oge ụfọdụ enwere m otu dị iche iche ugbu a nke ọtụtụ mmadụ anaghị amasị.
Mana ọ bụghị naanị na ịnweghị ike iwepu njikọ YouTube, mana ha anaghị ekwe ka iwepu aro ndị a.
Ihe ọzọ bụ ịkpa ókè agbụrụ dị na YouTube na vidiyo ndị ụlọ ọrụ ndekọ na-ebugo, ọtụtụ oge anyị nwere ike ịchọta ịdọ aka ná ntị a mara mma ma ọ bụ ihe yiri ya:
Achọghị m ịma ma pasta sitere na onye ọ bụla ọ bụ, mana ọ bụghị ndị a. Ọ bụ ego, n'agbanyeghị onye si bịa.
Na n'elu na ịkpa ókè agbụrụ na-enweghị ime ihe ọjọọ.
Ihe na-arụ ọrụ kacha mma ịghara imetụ ya aka
Ya mere, ana m eche, ọ bụrụ na ihe ọ bụla rụburu ọrụ, gịnị kpatara ị ga-eji metụ ya aka?
Ka anyị hụ, onye ọ bụla nwere ike imehie, mana ọ bụrụ na ihie ụzọ, mezie na karia imirikiti mmadu anaghi acho YouTube ohuru.
Eziokwu m na-aghọtaghị, bụ igwu olulu gị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Google na nkwanye ùgwù ya maka ndị ọrụ
Aghọtaghị m nsogbu ahụ: /.
Ọfọn, ọ na-ewe iwe na iji YouTube ị nwere akaụntụ gmail (ma ọ bụ google).
Ma, nke ọma ... Ọ bụghị na ịlele vidiyo ị ga-anọ na ya. D: ..
Nke ọzọ bụ akụkụ nke nkwanye egwu, ị pụtara ọrụ egwu google?, N'ihi na ọ dị mma… dị ka m nwere ike ijikwa ozi ịntanetị na-abịakwute gị.
No, m na-ekwu nke a: http://imageshack.us/photo/my-images/11/capturapa.jpg/
Ihe niile egosiri na foto
N'ebe ahụ anyị na-ahụ na m na-enweta vidiyo nke Thelọ ihe nkiri nrọ, Jordan Rudess, Dark Moor na Dimmu Borgir.
Thelọ ihe nkiri nrọ, Jordan Rudess na Dark Moor, dị mma n'ihi na enwere m mmasị na ha, mana ha ejirila Dimmu Borgir gbaghaa ya, ọ bụ eziokwu na ozugbo m malitere inyocha otu ahụ iji hụ ma ihe ha kwuru banyere ịbụ ndị na-atụ egwu ọ bụ eziokwu. Ma na mgbakwunye, enweghị m mmasị na otu ahụ nke ukwuu ma ahụbeghị m vidiyo ọ bụla ọzọ. So na ɛyɛ den ma wɔn sɛ wobedi sigya? Ini kiet?
Ha agaghị ekwe ka m hichapụ ndị a tụrụ aro, nke ahụ bụ ihe iwe
Emela ka iwe dị ọkụ na nke ahụ, ọ ga-abụrịrị iwe iwe site n'aka onye ọrụ ibe ya. N'ezie, ọ bụghị naanị Google na-eme nke ahụ, ha niile na-eme ya: Microsoft, Facebook, Yahoo ... nke ọma. Nwee obi ike, ọ bụrụ n'ịchọghị nke a, kwusi ịntanetị 😀
Ya mere, olee otu m ga-esi mekpa gị ahụ n'enweghị ịntanetị?
Ọ bụghị na ọ bụ iwe, ọ bụ eziokwu, mana n'ezie ị nweghị YouTube n'ihi na ị hụghị ya. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka berriches, amaara m na ọ bụ ụfọdụ nne na nna ọgọ ya were otu gwa nne ya ebe a (iwe si na ite ahụ), ma ọ dịkarịa ala, nke a na akara na blog.
N'ezie, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọgharị ma ọ bụ ya bụ nke na-atụgharị m na igbochi vidiyo.
Ọ bụ na ọ bụ ịkpa ókè agbụrụ na ọ na-ewute m.
Chefu ihe ncheta ị nwere O_O….
Obi ike m na-akwado gị 101%, nke mbụ n'ihi na anaghị m amasị Dimmu Borgir ma ọ bụ Cradle Of Filth ma ọ bụ nke ọ bụla na nke bullshit na nke abụọ n'ihi na iberibe Google aghọwo Microsoft nke narị afọ nke XNUMX. AKWYKWỌ ihe bụ ihe ga-eburu ya. Ma ghara ị anya ntị na Elav na ọ bụrụ na ọ kpasuo ya iwe, ọ ga-agbago ha ma dịkwa mma!
Damn, Apple fansboy xD xD nọ na-efu ugbua ebe a .. Kedu ihe ị chere banyere 3ndriago, m na-ewetara gị ebe a na Alain ka o wee nwee ike ịmepụta otu ihe ahụ na Fb? LOL
Na… Olee ihe apụl nwere njikọ ebe a? Bịa ka m na-ekwu
Mmadu obu eziokwu na o nwere ike buru na obi ike nwere ubochi ojoo were Google na YouTube jide ya, mana o gaghi abu ihe esemokwu eweghara nke oma, nzacha nke ihe omuma nwekwara ike ibu uzo nke ime nnyocha na ichi ihe omuma, inye ihe omuma atu
Onweghi otu fuck enyere Google
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na na na, na o doro anya
Nọmalị ihe ndị a na-ahazi site na akaụntụ gị, ana m ahapụ gị njikọ 2 nwere ike ijere gị ozi:
Gbalịa ihichapụ kuki ma ị nwere ike iji ABP zoo mmanya na-atụ aro. Firefox nwere ụfọdụ ndọtị iji kpọghee vidiyo ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ:
Ee, ọ bụrụ na ọbụghị na enweghị ụzọ iji dozie ihe, ọ bụ na ọ bụrụ na ndị mmadụ masịrị ya otu ọ dị na mbụ, gịnị kpatara iji tinye ya n'ụdị na-adịghị amasị ndị mmadụ? Ọ bụ nzuzu nke Google
Ọfọn, m ghọtara iwe gị dị ka onye ọrụ nke ọrụ ndị ahụ, ruo na YouTube, ọ dịla anya oge m ga-akwụsị iji ya. Maka nhichapụ vidio ya na arụmọrụ ya na Midori, n'agbanyeghị na ọ dị ka ihe niile, ọ bụ ihe uto.
Aghọtaghị m, ọ bụrụ na ị gafere na-atụ aro na òké ị nwere ike pịa ihe [X] na-egosi. Na na ị na-emechi ya na (ma eleghị anya) na-agwa ndị na-arụpụta engine ewepu gị na ndị. Igwe ndị ahụ enweghị ngọngọ, nyere ha aka ịmata gị nke ọma!
Echere m na (ikekwe ọ naghị esite ebe ahụ) na iwe iwe obi ike esiteghị na aro ndị ahụ n'onwe ha, mana site na oke iwe Google na ịchịkwa ọrụ nke ndị ọrụ ya n'ụzọ zuru ezu. M, ma ọ dịghị ihe ọzọ, achọghị m ka Google "mara m nke ọma", n'eziokwu, m ga-achọ ka ọ leghara ịdị adị m anya ...
N'ezie, ọ bụ ya, n'ihi na amaara m na enwere ike ihichapụ ha n'otu n'otu ka m si eme ụfọdụ oge ụfọdụ site na ntụnye Dimmu Borgir maka atụ.
Ihe na-akpasu iwe bụ obere nhazi nke dị maka ya, n'ihi na na YouTube nke tupu ị zoo zoo
Man, ma ọ bụ na onye ọ bụla na-achịkwa. Ezigbo Apple gị kachasị,, chọpụtaghị na ha chọrọ patent ma ọ bụ patent ọrụ na iPhone nke na-ekweghị iji igwefoto dekọọ vidiyo na Concerts na ihe omume nke ụdị a? Amaghị m ma ọ bụrụ na ha eburu ya, mana nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ha emebi ihe niile nwere ike imebi. Nakwa eziokwu na mgbe ọ bụla ha chọrọ ma site na ebe ọ bụla ha chọrọ, ha deactivate iPhone na ị maghịdị 😀
ma na ọ bụrụ na-emerụ ihe niile na mmeko nwoke
Gịnị bụ isiokwu a? Eziokwu bu na aghotaghi m ... ofuma obi ike, enwere arụmọrụ nke Google na-akpasu gị iwe, mana mepee isiokwu naanị maka nke ahụ? : Ma ọ bụ
Ọbụghị gị, Tina .. Nke ahụ bụ n'ezie n'ihi na keisi ocha na-amasị ya na ụlọ akwụkwọ sekọndrị zigara ya ihe ikuku nsusu na ọ bụ nkụda mmụọ .. Ebe ọ bụ na o nweghị onye ọ bụla ọgụ, ọma, ọ dịghị ihe, ọ meghere nchọgharị na ihe mbụ wee pụta bụ Google .. 😀
Nke ahụ bụ n'ezie n'ihi na keisi ocha na-amasị ya na ụlọ akwụkwọ sekọndrị zitere ya nsusu ọnụ
Olee mgbe m kwuru na ọ masịrị m? ¬ ¬ Amaghị m na m nwere mmasị na blondes.
Nke ahụ kwuru site na KZKG ^ Gaara, ọ bụghị m
Na mgbakwunye, ahụbeghị m ya otu izu, ị hụrụ ụdị ohere enwere ike iwepụ
N'agbanyeghị, m ga-agwa gị ọzọ ihe m gwara gị ụnyaahụ:
Ọ bụghị na ọ bụ iwe, ọ bụ eziokwu na ọ bụ eziokwu, mana ọ bụ eziokwu Ebe ọ bụ na ịnweghị YouTube, ị naghị ahụ ya. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka berriches, amaara m na ọ bụ ụfọdụ nne na nna ọgọ ya were otu gwa nne ya ebe a (iwe si na ite ahụ), ma ọ dịkarịa ala, nke a na akara na blog.
Y’oburu n’achoghi ndi ogba n’ulo akwukwo gi, ị nwere ike ime ka m mata ha oge obula, ana m enye ndi niile choro ya n’anya.
Ọfọn, ị bịarute n'oge ya hahahaha, ọ bụ ezie na ee, ọ dị ezigbo mma.
E wezụga nke ahụ, ọ bụ obere maka gị
Uko, enwego m enyi nwanyi kemgbe 14, nsogbu adighi ahhahaha
Are ka mee agadi maka ya hahaha ma oge agafeela ịkọ ya n'agbanyeghị agbanyeghị kamel nke elva anaghị abanye n'isi ya
N'ime njirimara nke YouTube na njikọ ya na Gmail, ọnwụnwa dị mma maka ndị nwere ọtụtụ agwa, ndị dị ka m
Industrylọ ọrụ isi obodo (n'ụdị ya niile na akụkụ ya niile), ya na agụụ ya na-adịghị eju afọ, na-aga ogologo oge iji mee ka ịntanetị bụrụ ohere nke njikwa ka ukwuu, iji bulie ya dị ka ngwa ahịa ma belata ohere nke ojiji ndị ọzọ.
Taa, ọ gaghị ekwe omume ịnyagharịa na-enweghị okwu ọ bụla ị dere, abụ ọ bụla ị na-ege, vidiyo ọ bụla ị na-elele na ibe ọ bụla ị gara, na-emecha dekọọ ma debe ya na ọdụ data nke enwere ike iji ma ọ bụ ree maka ebumnuche dị iche iche (na-abụkarị maka ọmụmụ ihe). oriri na ahịa).
Google emeela ya mgbe nile (ya na ọrụ ya niile), mana ụbọchị ole na ole, mgbe iwu nzuzo nzuzo ya dị iche iche ga-abanye n'ike, ha ga-eme ya n'ụzọ nzuzu na ụzọ ọjọọ, na ọ ga - akarị (na cynicism) site «facebook ».
Ma ọ bụghị na ọ bụ okwu nzuzo nke onwe (n'ezie na ha achọghị ịma ihe onye ọrụ ọ bụla na-eme n'otu n'otu), mana nke nlekota mmekọrịta nke na-enye ohere ịmepụta ọtụtụ akara na edemede, dịka ọdịmma nwere ike ịnwe ndị na-anakọta ha na ndị zụrụ ha.
Anọ m na-eche ọtụtụ oge n'oge nyocha gbasara Foucault kọwara na "Lelee ma taa ahụhụ" na panopticon na ịntanetị abụrụla.
Kasị mma ikwu
Eziokwu dị n'ebe ahụ…
Damn ELAV, olee otu odi mfe iji gwakọta ihe? Lee, ebe a ka anyị na-ekwu maka Google, ọ bụghị gbasara onye ọzọ. Ma hey kemgbe ị kwuru banyere Apple naanị m na - agwa gị otu ihe: ha bụ alaeze / naanị ma ọ nweghị mgbe ha gbalịrị izochi ya. Mara na ọ bụrụ na ịzụta otu n'ime ngwaahịa ha, ị ga-ekekọta onwe gị na usoro ihe arụ ha. Ha na - eme ka o doo anya na EULA: kọmpụta gị abụghị nke gị, sọftụwia gị abụghị nke gị, ihe ị rụpụtara na ya bụ nke gị. Kedu ka ị mere? Ihe na-ewute m banyere Google bụ na ha na-ezo n'azụ facade nke nnwere onwe na nkwanye ùgwù maka onye ọrụ na n'oge na-adịghị anya ha na-akụ gị otu ma ọ bụ njọ karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Site n'ụzọ ELAV enwere m mmasị na nkọwa nke akara ngosi Safari na-esote akara ngosi gam akporo ... nke a bụ ụdị ihe enyi anyị Alain achọghị ịghọta
Ezi post. Echiche nke Iri na atọ banyere panopticon na ịntanetị mere ka m ghọta na ọ bụghị ihe ọjọọ ịpụ na gmail na ụlọ ọrụ ọzọ n'ihi na google na iwu nzuzo ọhụrụ ya (http://www.google.com/policies/privacy/preview/) Na-enye m ihe m achọghị. Ya mere, achọgharịrị m ụgbụ ahụ ma enweghị ike ịchọta ihe ọ bụla na mpụga: aol, yahoo, hotmail na: S gmail.
M na-eche na obi ike Have nwere ikike ime mkpesa banyere ọrụ Google, mana m na-atụ egwu na ọ dịkwa mkpa ịnye ndị ọzọ ụzọ dị mma maka ndị na - agụ ya. N’etughi oge obula, a na m ezitere gi ezigbo obi ekele na + 1 karma ka obi ike
Ọ bụ naanị na elva ochie ga-emegide m.
Site n'ụzọ, ịnwere ike ịnwale Gmx
the Fox dijo
Nwere ike iji jabber
Nye Firefox ọdịdị nke Opera na FXOpera